နယူးယောက်မြို့ရှိ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အာဆီယံအဖွဲ့ရုံးများ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အာဆီယံနေ့အခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ် – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
နယူးယောက်မြို့ရှိ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အာဆီယံအဖွဲ့ရုံးများ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အာဆီယံနေ့အခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်
(၃၁-၇-၂၀၁၉ ရက်၊ နယူးယောက်မြို့)
အာဆီယံထူထောင်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အာဆီယံနေ့အခမ်းအနားကို နယူးယောက်မြို့တွင် ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အာဆီယံအဖွဲ့ရုံးများမှ နှစ်စဉ်ပူးပေါင်းကျင်းပလျက်ရှိရာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အာဆီယံနေ့ အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်တွင် Japan Society ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားသို့ အာဆီယံအဖွဲ့ရုံးများမှ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်/ သံအမတ်ကြီးများနှင့် ဇနီးများ၊ ဖိတ်ကြားထားသည့် အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဧည့်သည်တော်များ စုံညီစွာ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ မြန်မာအဖွဲ့ရုံးမှ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ဦးဟောက်ဒိုဆွမ်းနှင့် ဇနီး ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ရုံးဝန်ထမ်းများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အခမ်းအနားတွင် အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သော ထိုင်းအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်က နှုတ်ခွန်းဆက် မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် အာဆီယံအနေဖြင့် ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လုံခြုံရေးနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ နောက်ကျ ကျန်ရစ်ခြင်း မရှိစေရေး ဦးတည်ချက်အတိုင်း အရှိန်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ အာဆီယံ၏ ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သော “One Vision, One Identity, One Community” နှင့်အညီ ပေါင်းစည်းမှုစွမ်းအားဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အနာဂတ်ကမ္ဘာဖြစ်စေရန်အတွက် ဆက်လက်၍ ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း စသည်ဖြင့် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အထူးဧည့်သည်တော်များဖြစ်သည့် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် H.E. Mr. António Guterres၊ (၇၄) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေ ညီလာခံသဘာပတိ H.E. Mr. Tijjani Muhammad Bande နှင့် (၇၃) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံသဘာပတိ၏ Deputy Chef De Cabinet တို့မှ မိန့်ခွန်းများအသီးသီး ပြောကြားခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။